Barnaamijyo aad isku hawli karto muddada aad go’aanka sugeyso
Hay’ado badan oo aan macaash doon ahayn, sida ururada isboortiga, ururada dhaqanka, ururada samafalka, kaniisadaha ama masaajidada, waxay barnaamijyo hawlgelin u abaabulaan adiga oo magangelyodoon ah. Barnaamijyadaas waxay tusaale ahaan noqon karaan kuwo laga helayo aqoon dheeraad ah oo ku saabsan suuqa shaqada ama cilmiga bulshada, kuwo lagu barto af-iswiidhishka, ”qaxweyn luuqadeed” (oo aad ku tababbaraneyso ku hadalka luuqadda iswiidhishka) ama barnaamijyo ku saabsan wanaajinta caafimaadka.
Waxaa iyana jira ururro waxbarasho iyo iskuulaad dadweyne oo adiga oo magangelyodoon ah u abaabula kulamo aqoonkororsi ama koorsooyin lagu barto af-iswiidhishka iyo nolosha bulshada Iswiidhan. Halkaas kooxkoox ayaa loogu kulmaa oo lagu bartaa iswiidhishka, iyadoo uu joogo macalin ama hormuud waxbarasho. Waxaad iyana ka qaybgeli kartaa go’aaminta hannaanka adiga iyo kooxdaada aad wax u baran lahaydeen. Kooxdiibana marar dhawr ah ayey kulmeysaa.
Barnaamijyada ay abaabulaan hay’adaha, ururrada waxabarashada iyo iskuulaadka dadweynaha intooda badan waxay ka mid yihiin olole bulsho ee loogu magac daray Kalkaalada hore ee magangelyo-doonka (ee loo soo gaabiyo TIA). Ka qaybgalka barnaamijyada waa bilaash. Haddaad dooneyso inaad ka qaygasho aqoonkororsi, koorso ama barnaamij kale oo ka mid ah Kalkaalada hore ee magangelyodoonka waa inaad halka aad ku nooshahay kala xiriirto urur waxbarasho, iskuul dadweyne ama hay’ad samofal. Si aad barnaamij uga qaybgasho waa inad muujin karto kaarkaaga LMA.
Websaydhka www.aktiviteterisverige.se waxaad ka arki kartaa barnaamijyo badan oo ka mid ah Kalkaalada hore ee magangelyodoonka ee laga helo halka aad ku nooshahay. External link, opens in new window.
Bixinta kharashka ku baxa safa­rada barnaa­mijka
Haddii barnaamijka aad ka qaybgaleyso uu ka mid yahay Kalkaalada hore ee magangelyodoonka, waxay Hay'adda socdaalku xaaladaha qaarkood bixin kartaa kharashka kaaga baxa safarada gaadiidka dadweynaha ee aad ku tageyso barnaamijka. Weydii abaabulaha inuu barnaamijku ka mid yahay Kalkaalada hore ee magangelyodoonka.
Haddaad u baahan tahay in laguu celiyo kharashka safarada, waxaad abaabulaha barnaamijka ka codsaneysaa inuu ku siiyo caddayn muujineysa inaad tahay ka-qaybgale barnaamij. Caddaynta waa inaad u geysaa Hay'adda socdaalka.
Kumaa loo gudayaa kharashka safa­rada?
Waxaa laguu gudayaa kharashka safarada haddaad buuxisay 18 sano oo aad
magangelyo ka codsatay Iswiidhan, kiiskaagana lagu qaadayo halkaan
sugeyso go’aankaaga ugu horreeya ee kiiska ruqsadda deganaashaha
Iswiidhan ka heshay ruqsadda deganaashaha hase ahaatee aad weli ku nooshahay guryaha kumeelgaarka ah ee Hay’adda socdaalka.
Haddii aad leedahay dakhli ama aad dugsi sare dhigato, laguuma celin doono kharshka safarada aad ku tageyso barnaamijyada Kalkaalada hore ee magangelyodoonka.
Si laguugu gudo kharashka safarada barnaamijka, waa in masaafo ugu yaraan la eg saddex kilomitir ay u dhexeyso gurigaaga iyo goobta lagu qabto barnaamijka. Hase yeeshee haddaadan u lugayn karin goobta barnaamijka, taasna ay tusaale ahaan ugu wacan tahay inaad naafo tahay ama aad carruur yaryar kaxeysaneyso, kolley waad heli karaysaa in laguu celiyo kharashka kaaga baxa safarada gaagaaban ee gaadiidka dadweynaha.
Ugu horeyn, waxaa laguu celin karayaa kharashka safarada barnaamijyada lagu bixiyo isla degmada aad ku nooshahay. Sidaas daraadeed, waa inaad marka hore raadsato barnaamij kugu habboon ee lagu bixiyo degmadaada. Haddii meesha aad ku nooshahay aysan ka jirin barnaamijyo filan, waxaa xaaladaha qaarkood laguu celin karaa safarada aad degmo kale ku tageyso. La hadal waaxdaada qaabilaadda ee Hay’adda socdaalka oo weydii safarada kharashkooda laguu oggol yahay.
Lacagta safarka waxaa lagu shubayaa kaarkaaga bangi, badanaa bishiiba mar. Haddii aad qabtid su'aalo ku saabsan celinta lacagta safaradaada, la xiriir waaxdaada qaabilaadda.
Haddaad joojiso ka qayb­galka barnaa­mijka
Haddaad joojiso ka qaybgalka barnaamijka, xaq uma lihid lacagta safarka. Markaa waa inaad wargeliso abaabulaha barnaamijka iyo waaxda qaabilaadda inaad ka hartay barnaamijka. Abaabulaha barnaamijkuna wuu la xiriiri karaa waaxda qaabilaadda isagoo wargelinaya inaad ka tagtay barnaamijka.
Haddaad xanuunsan tahay ama ay jiraan daruufo kale oo muddo gaaban kaa hor taagan inaad tagto barnaamijka waa inaad wargelisaa abaabulaha.
Iskaaga u baro af-iswi­id­hishka iyo nolosha buls­hada
Internetka waxaa laga helayaa barnaamijyo badan ee uu qofka iskii afka iswiidhishka uga baran karo.
Bogga Lära svenska (Baro Iswiidhishka) ee www.informationsverige.se ayaad ka heleysaa linkiyada oo dhan External link, opens in new window.
Barnaamijyada badankood webka ayaa wax looga bartaa. Dhammaantoodna waa bilaash.
www.informationsverige.se External link, opens in new window. waxaa iyana laga helayaa macluumaad badan oo ku saabsan nolosha bulshada Iswiidhan.
Kordhi aqoon­taada diji­taalka aasaa­siga ah
”Digitala jag” (Anigayga dijitaalka ah) waa waxbarasho loogu talagalay adigaaga doonaya inaad internetka ka barato sida aad u isticmaali karto adeegyada dijitaalka ah ee kuu sahlaya hawlahaaga nolol-maalmeed, tusaale ahaan la xiriirka xaafiisyada kala duwan ee dawladda. Waxbarashadaani waa bilaash, luqado badan ayaana lagu heli karaa.
Wixii faahfaahin ah ka akhriso www.digitalajag.se External link, opens in new window.